भेरी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण सुरु
बाँके । नेपालगन्‍जस्थित भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गरिएको छ । रियल टाइम पोलिमर चेन रिएक्सन (आरटीपीसीआर) उपकरण शनिबार जडान भएपछि आजबाट कोरोना परीक्षण सुरु भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. प्रकाश थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण शनिबार साँझबाटै सुरु गरिए पनि आजबाट नमुना संकलन गरिएको छ । आरटीपीसीआर उपकरण जडान तथा परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोली काठमाडौंबाट ‘रिएजेन्ट केमिकल’ लिएर शुक्रबार नेपालगन्‍ज आएको थियो ।
रगत परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने ‘रिएजेन्ट केमिकल’ को नेपालगन्‍जमा अभाव भएपछि काठमाडौंबाट मगाइएको हो । बाँके र बर्दियाका जनताको कोरोना सङ्क्रमण परिक्षणका लागि लक्षित गरी सो अस्पतालमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो । प्रयोगशाला सञ्‍चालन भएपछि अब स्वाब नमुना परीक्षणका लागि भैरहवा अथवा काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सो उपकरणबाट एकदिनमा १०० जनाको नमुना परीक्षण गर्न सकिने डा. थापाको भनाइ छ ।
बाँकेका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीमध्ये शनिबार थप १४ जनाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ देखिएको छ । यससँगै बाँकेमा शनिबारसम्म भएका सबै परिक्षणमा ४ सय ९६ जनाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ ।
जिल्लाका विभिन्‍न अस्पतालमा उपचाररत १५ बिरामीको वैशाख ३ गते संकलन गरिएको ‘थ्रोट स्वाव’ को नमुनामध्ये शनिबार बेलुकासम्म १४ जनाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको र १ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, शनिबार थप ८ जनाको नमुना संकलन गरिएको छ । हालसम्म बाँकेमा पीसीआर विधिबाट एक सय जनाको परीक्षण गर्दा ९१ जनाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ भने बाँकी ९ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । आरडीटी विधिबाट ४ सय ५ जनाको जाँच गर्दा सबैको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ । बाँकेमा हालसम्म ५ सय ५ जनाको कोरोना परिक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ४ सय ९६ को रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आइसकेको छ भने ९ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । -रासस
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा फेरि एक सातादेखि १० दिनसम्म निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर... ५३ मिनेट पहिले